मेसीसँगै रोनाल्डो पनि बाहिरिए
उरुग्वेद्धारा पोर्चुगल २–१ ले पराजित, रोनाल्डोको पनि विश्वकप यात्रा सकियो
माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने विवेकशीलका संयोजकसहित ९ जना प्रहरी नियन्त्रणमा(तस्बिरहरू)
सुन्तलीले नमूना बस्तीमा मनाइन् जन्मदिन
तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस् अर्जेन्टिनाविरूद्ध फ्रान्स, मेसीको विश्वकप जित्ने सपना अधुरै
माग पूरा नभएसम्म अनशन : डा. केसी
सरकार फाष्ट ट्रयाकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दै
जलाशययुक्त आयोजनासँग पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौता
रसियामा जारी विश्वकपको २१औं संस्करणको नकआउट चरणको पहिलो खेलबाट घर फर्किएको मेसीसँगै दोस्रो खेलमा रोलान्डो पनि घर फर्किएका छन्। विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको दोस्रो खेलमा उरुग्वेले पोर्चुगललाई २–१ ले पराजित गरेसँगै रोनाल्डोको अगाडिको यात्रामा पूर्णविराम लागेको हो। फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका स्टार इडिन्सन काभानी चम्किएपछि उरूग्वेले युरोकप विजेता पार्चुगललाई हराएको हो। जितपछि उरुग्वे क्वार्टरफाईनलमा फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा
रसियामा शनिबार राति भएको नकअाउट चरणको दोस्रो खेलमा दुई पटकको विश्व विजेताले साविकको युरोकप विजेता पोर्चुगललाई २-१ गोलले हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नकआउट चरणको दोस्रो खेलमा उरूग्वेले पोर्चुगल विरूद्ध खेलको पहिलो हाफमा गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो। उरूग्वेका लागि ‍इडिसन काभानीले गोल गरेका थिए। उनले खेलको ७ औं मिनेटमा हेडमार्फत पहिलो गोल गरे। लुइस
प्रहरीले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकसहित ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। संयोजक उज्जवलथापा सहित ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइ वैद्यखानामा राखिएको विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मिलन पाण्डेले बताए। ‘शान्तिपूर्ण तवरले विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो, यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको छ,’उनले भने। शनिबार माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौं, निषेधित
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाभित्र आमरण अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले ठाउँ सारेर जिल्ला खेलकुद विकास समिति अन्तरगतको कभर्ड हलमा लगेको छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न जाँदै गर्दा पक्राउ परेपछि डाक्टर केसीले शनिबार दिउँसो ३ बजे प्रहरी कार्यालयमा अनसन सुरू गरेका थिए। कभर्ड हलको मुख्य गेटमा
सुन्तलीले आफ्नो जन्मदिन रौतहटको सन्तपुर एकीकृत नमूना बस्तीमा मनाएकी छिन्। धुर्मुस,सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा निर्मित रौतहटका चन्द्रपुर नगरपालिका,सन्तपुरमा रहेको नमूना बस्तीमा सुन्तलीले माझी समुदायका बालबालिकासँग खुसी साटेर आफ्नो जन्मदिन मनाएकी हुन्। नमूना बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब एक सय जना बालबालिकासँग खुसी साटासाट गरेर उनले जन्मदिन मनाइन्। मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूले सम्मान गरी उनको जन्मदिनलाई विशेष बनाए । उनीहरूले
फ्रान्स रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उपाधिको बलियो दाबेदार अर्जेन्टिनलाई ४-२ गोल अन्तरले हराउँदै फ्रान्स अन्तिम ८ मा प्रवेश गरेको हो। फ्रान्सलाई जिताउन एम्बापेले २ तथा ग्रिजम्यान र पाभार्डले १-१ गोल गरे। अर्जेन्टिनाका लागि डि मारिया र मेराकाडोले गोल गरेका थिए। पहिलो पटक अर्जेन्टिनासँग अन्तिम १६ मा
काठमाडौँ — केही दिनदेखि दूधमा कोलिफर्म पाइएको विषय सञ्चार माध्यममा छाएको छ । यसको प्रभाव डेरी उद्यमीलाई नपर्ने कुरै भएन । उपभोक्ताहरू डेरी उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको पोकाको (पाउचको) दूधको विकल्प खोज्ने क्रममा खुला रूपमा पसलमा पाइने वा प्रत्यक्ष किसानले वा दूध ग्वालाले बिक्री गर्ने दूधको भर पर्न थालेका छन् । यसरी अमुक व्यक्तिले खुला रूपमा, खाद्य उद्योगको
काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आमरण अनशन जारी रहने बताएका छन् । जुम्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका केसीले कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सरकारले जनहितकारी अभियान तुहाउन अनशनस्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बताए । उनले हिरासतमै अनशन सुरु गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक मेडिकल माफिया र भ्रष्ट नेतालाई फाइदा हुने
असार १७, २०७५ सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । गत शुक्रवार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सो विधेयक सरकारले आज प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दैछ । सम्भवत: सरकारले आज एकल कार्यसूची सहित सो विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी १५
मुलुकमै पहिलोपटक जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासंग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच आज उक्त सम्झौता भएको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सो सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले र आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध–सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले